I-Noontec Hammo TV, ii-headphone ezingenazingcingo ezenzelwe ikhaya | Iindaba zeGajethi
Sibuyele kwiActualidad Gadget ngoqwalaselo olujolise kwividiyo, kwaye oko kukuthi abasebenzisi abaninzi baya bekhetha ezinye iindlela ezisemgangathweni xa kuziwa kwisandi. Elona qabane lilungileyo kwi-HDTV kwiimeko ezininzi yinkqubo elungileyo yesandi. Nangona kunjalo, kweli xesha siphila kulo, kulula ukuhlala kwizakhiwo apho ukuhlonipha abamelwane kufuneka kuvuze umnqweno wokubukela imovie elungileyo.
Ngesi sizathu, uninzi lweendlela zokumamela ngaphandle kwamacingo zizelwe ngenjongo yokuba sinokonwabela isandi esisemgangathweni kwiinkqubo zethu zokuzonwabisa ngaphandle kwesidingo sokwakha iindonga. Namhlanje sikubonisa i-Hammo HD kunye neentloko zeTV ezivela eNoontec, inkqubo ye-hi-fi engenazingcingo eyilelwe usuku lwakho nosuku kunye nekhaya lakho.
Kodwa kuqala kufuneka uyazi Noontec, uphawu esisele silonwabele ukwazi kwezinye iiwebhusayithi zoodade ezinje ngeActualidad iPhone kwaye sinike ukholo olululo malunga nokusebenza kwayo. Inkampani yaseTshayina iye yazibeka ngokukhawuleza njengenye indlela enexabiso eliphantsi kwii-greats zomsindo weengcali kwaye yema nkqu nakwiimpawu ezinembali ende njengoSony. Kungenxa yoko le nto uNoontec eqale ukuthengisa inani leemveliso kwinqanaba lehlabathi.
1 Ukunikezelwa kunye nokupakishwa
2 Uyilo kunye nezixhobo
3 Ukulula kunye nokuphatheka
4 Iimpawu zobugcisa
5 Ikwayimini yakho yemihla kunye ne-smartphone yakho
Ukunikezelwa kunye nokupakishwa
Siyazi ukuba mhlawumbi yeyona nto iphantsi kuvavanyo lwethu, kodwa njengomthandi wetekhnoloji ndifumana imvakalelo entsha nge-unboxing nganye, ekuhlala kukuvula iphakheji kunye nephunga elitsha. Ndiyazi ukuba kuninzi lwee-geek ngalo mzuzu kufana nobhaptizo lwazo zonke izixhobo, Kwaye umbono wokuqala ukusukela ngala mzuzu siqhubela phambili nokukhupha izinto nawo ubalulekile. Kule meko, ii-TV ze-Noontec Hammo ziboniswa ebhokisini apho i-priori inokubonakala ngathi inkulu kakhulu kuthi, kodwa ke inazo zonke iingcinga ezisehlabathini, kwaye oko kukuthi ngaphakathi sisiseko sesinyithi apho ii-headphone ziya kuhlala khona kakhulu yexesha.
Ukuvula iphakheji kululaSiphambi kwebhokisi emnyama yekhadibhodi esongelwe kwimikhono yamaphepha enika iifowuni kunye neempawu zazo. Ngaphandle kwengxaki, sikhawuleza singene kwii-headphone eziza kusongwa ngelixa sidibanisa isikhokelo seebhokisi apho siza kufumana wonke umxholo. Umsebenzi omangalisayo wokupakisha nguNoontec, ukongeza, umgangatho wokupakisha sisandulela sento esiya kuyifumana ngokulandelayo.
Sijonge ii-headphone ngokubanzi ezenziwe ngezinto zeplastiki. Abo bazamile ii-headphone ezininzi, njengemeko yam, baqala ukungcangcazela xa sijamelene nezi ntlobo zezixhobo ngenxa yokuba uninzi lwazo luphela lophuka phezulu kwentloko. Nangona kunjalo, uNoontec ubonakala ngathi ebengenazicwangciso zokusonwabisa kule ngxaki. Iifowuni eziphathwayo ziqiniswa kwialuminium kwiindawo ezibuthathaka, kunye nebhanti yentloko ngokwenene licandelo lesinyithi eliza kubonelela ngokuxhathisa ngokwaneleyo kunye nokuguquguquka. ukuze ingabi yinto yokudlala eyaphukileyo kwiinyanga ezimbalwa.
Uyilo lwanamhlanje njengoludala ngexesha elinye, ukubamba amehlo kodwa mhlawumbi ndibonile ukuba sithathela ingqalelo ukufana kwayo kuluhlu lweeBeats. Nangona kunjalo ii-angles ze Ezi TV zeHammo ezivela eNoontec zibukhali ngokucacileyo kwaye zinoburharha. Xa sizibona okokuqala sinokucinga ukuba zisencinci kakhulu ukuba zinganandipha esona sandi silungileyo, kodwa imvakalelo iya kuthi shwaka ngokukhawuleza. Zikhanya ngokugqithileyo ngenxa yokudityaniswa kwealuminiyam kunye neplastiki, kwaye kwimbono yam oku kuluncedo ngakumbi kungeloncedo.
Ngokumalunga neendawo zonxibelelwano ngqo nolusu, kucacile ukuba zigqunywe ngesikhumba sokuxelisa, Kwangelo xesha linye ngaphakathi kwibhanti yentloko sifumana umbandela ofana negwebu lememori, ngelixa kwiindlebe kungugwebu lwakudala, sicinga ukuba ngenjongo yokuchitha ubushushu obunokububonakalisa.
Ukulula kunye nokuphatheka
Njengoko besesitshilo, inyani yokuba ii-headphone zakhiwe ngokulinganayo phakathi kwealuminium kunye neplastiki kuthetha ukuba ukuzinxiba entloko akuyi kuba lidini kwiiyure ezimbalwa. Njengoko benditshilo ekuqaleni, bendisetyenziselwa ii-headphone zeSony PlayStation Gold (ekuphela kwento enebhedi endiyisebenzisa rhoqo), into yokuqala ocinga ukuba ayinakwenzeka ukuba ii-headphone zigubungele yonke indlebe. Akukho nto iqhubekayo kwinyani, ingaphakathi ligobile kancinci ngenjongo yokuba yonke indlebe ingaphakathi koncedo lokuva. Ngamaxesha obushushu obukhulu oku kubangela ukuba uninzi lwethu lubenexesha elibi ngenxa yeqondo lobushushu elinokufikelela kwiindlebe zethu.
Olunye uncedo lolu hlobo loncedo lokuva kukuthintela isandi ngokubhekisele ngaphandle. Ndiyakuqinisekisa ukuba kungekuphela koxolo lwasekhaya akunakwenzeka ukuba uve nantoni na ngaphandle kwee-headphone sakuba sifike kumandla amakhulu kune-25%, kodwa nokuba kwizithuthi zikawonke-wonke ukwahlukaniswa ngaphandle kuphezulu. Kwakungekho ngaphantsi kokulindelwa kwimveliso enezi mpawu.
Kwelinye icala, kumxholo wepakeji siya kufumana ifayile ye- ingxowa eyenziwe ngezinto zevelvet ukumelana ngokuqinisekileyo kuya kusivumela ukuba sizithutha ngokulula. Kufuneka siyikhumbule loo nto ezi ntloko ziyasongwaOko kukuthi, nje ukuba siqokelele izixhobo zokuva kwintloko ebambekayo, kulula ukuzibeka engxoweni kwaye sizithutha kungekuphela ngokulula, kodwa sinciphise nethuba lokophuka ngenxa yalo naluphi na uhlobo lwengxaki kwezothutho.
Sele sithethile ngobude malunga nemigaqo yoyilo kunye nentuthuzelo kodwa ... Zenza njani ezi zandi zeNoontec Hammo HD? Lelona candelo libaluleke kakhulu ngaphandle kwamathandabuzo. Iifowuni zeVortik HD500 zisiqinisekisa ngokwamaxesha afanelekileyo, ngaphandle kokuba i-bass iqulethwe ngokucacileyo, ngokungafaniyo nezinye iimveliso ezibenza bakwazi ukufihla iziphene, kwezi zeHammo TV umgangatho wesandi ulawula, kulula ukuchaza sonke isixhobo okanye intshukumo kwiimuvi. Nangona kunjalo, kufuneka sikhumbule ukuba sijamelene nee-headphone ezingenazingcingo, ke ukuba bekungezizo ezesatifikethi se-APTX esiqinisekisa ubuncinci bokuhamba kade, sinokuphumelela kancinane.
Sicinga ukuba ezi ntloko ziyi I-Bluetooth, pero Bahamba phantsi kweRadio Frequency ukuba sizisebenzisa ngesiseko sabo ngeenjongo zokuphepha ukuphazanyiswa okanye ukwehla komgangatho esinokuthi sibe nako ngeBluetooth eqhelekileyo, umlinganiso othathwe zezinye iimveliso ezininzi ukuphucula umgangatho wezandi zazo ezingenazingcingo. Oku kusinceda ukuba sifezekise kungekho ngaphantsi kweeyure ezingama-50 zokusetyenziswa kwityala elinye.
Ngaphandle kwayo yonke le nto, sijamelene nee-headphone ezinalawo macala olawulo lokudlala olungasayi kusebenza nesinye isixhobo esingelilo isiseko esisemthethweni esihamba nathi kwiphakheji. Ukubeka ngokungqongqo technical esinayo:
Ukuphindaphinda ukusuka kwi-5 ukuya kwi-30.000 Hz
Ikwayimini yakho yemihla kunye ne-smartphone yakho
Ngokukhawuleza kwaye kulula, xa uvula i-Hammo HD yakho iya kuvela kuluhlu lwezixhobo zeBluetooth kwi-smartphone yakho, ngoku ungawaqhagamshela. Kwimeko yethu besiwavavanya nge-iPhone kunye neSpotify esemgangathweni eqatha, kwaye umahluko ngokubhekisele kwisandi nge-3,5 mm yeJack ayinamsebenzi, nangona uhlobo lwesandi lutshintsha. Kwimeko yesandi seBluetooth, siza kuzuza kumandla esandi (kuba umthamo wesixhobo kunye neefowuni zilawulwa ngokwahlukeneyo), kodwa mhlawumbi siphulukana noluhlu lwamaxesha. Ngokunjalo, ndikonwabele umgangatho olungileyo wokumamela kunye nabo.
Kwimeko Ukucwangciswa kwesiseko kulula kakhulu, inetekhnoloji Ikhonkco elilumkileyo, Ke baya kuba ngokukhawuleza kwaye ngokulula babelwe kwisiseko sabo, ubumbeko lwenziwe ukuze ungalahli mzuzu. Ukongeza, isiseko sine-3,5mm Jack ukuya kwi-LR iadaptha yomsindo, kunye nenye i-3,5mm Jack kuqhagamshelo lwe-USB, ukuze sikwazi ukukhetha ngokulula uhlobo lonxibelelwano esifuna ukuba nalo, ngokungathandabuzekiyo luya kuqhelana ngokulula nalo naluphi na iithelevishini zethu.
Kudala ndisebenzisa uNoontec Hammo HD ngamandla Kwinguqulelo yayo yeTV kwaye inyani kukuba bakhulisiwe njengenye indlela ebalulekileyo kwezinye iimveliso ezinikezela ngesandi esifanayo somgangatho ngexabiso eliphezulu kakhulu. Umahluko phakathi kweNoontec kunye nezinye ii-Beats ze-brand brand kukuba sinezinto ezininzi ngexabiso elifanayo. SineBluetooth, i-3,5mm Jack, isiseko sekhaya ... asizukufumana nasiphi na isithintelo kwii-headphone ezijikeleze i- € 139. Ewe bayahamba noyilo olukumemayo ukuba ubathathe esitratweni nakwizinto ezisemgangathweni, kokubini kwizixhobo kunye nakwipheripherali nakwiihedfoni ngokwazo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ukuba ungumthandi wolu hlobo lwemveliso kodwa awuboni kufanelekile ukuhlawulela iimveliso ezaziwayo, okanye ufuna ukuthatha ithuba lokuhluka kweHammo HD, Ndicebisa kakhulu ezi ntloko. Ungazifumana LAPHA nge- € 139,99 nje.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » I-Noontec Hammo HD, ii-headphone ezingenazingcingo nazo zisekhaya
I-Android Pay ngoku iyafumaneka eSpain ivela kwi-BBVA